Samsung Exynos 850: Chip 4G vaovao ho an'ny mid-range | Androidsis
Samsung dia nanolotra mpikirakira finday vaovao mikendry ny elanelam-potoana finday avo lenta, amin'ity tranga ity ny filokana dia satria mbola mampiasa ny fifandraisana 4G izy ireo. Exynos 850 dia ho maodely etsy ambany Exynos 880 ary miaraka amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'ny core 8 Cortex-A55 2,0 GHz.
Fantatra io CPU io rehefa tonga tao amin'ny Samsung Galaxy A21s, fitaovana iray izay mirehareha fizakantena lehibe noho ny bateria sy ny fanjifana fanjifan'ny SoC nampidiriny. Ny orinasa koreana dia manolotra azy tapa-bolana taty aoriana ary nanondro fa chip 8-nanometer tena mahomby izy io, izay ho tonga amin'ny modely avo lenta.
1 Ny rehetra momba ny chip Exynos 850
Ny rehetra momba ny chip Exynos 850
Ny zava-bita dia ho zava-dehibe noho ny hafainganam-pandehany tonga fitaovana, ny fahombiazan'ny core dia ho lasa 2,0 GHz. Ny Cortex-A55 dia miantoka fitoniana lehibe, hatramin'ny nanambarana azy ireo tamin'ny taona 2017 ary tian'ny mpanamboatra azy ireo ho ilay nampiasaina tamin'ity puce 4G vaovao ity.
Ny GPU amin'ity maodely ity dia ho lasa Mali-G52, sary izay efa fanta-daza ary azo antoka fa tena tsara raha ny amin'ny fanatanterahana asa miaraka amina fampiharana izay mitaky fampisehoana sary. Ireo telefaona miloka amin'ny Samsung Exynos 850 Izy ireo dia mety manana vahaolana feno HD + efijery, LPDDR4x RAM ary eMMC 5.1 fitehirizana.
Raha jerena ny fizarana fifandraisany, ny terminal izay ahatongavany dia tsy hanana na inona na inona, satria ho avy izy miaraka amin'ny Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, GPS, AGPS ary fifandraisana hafa. Ireo fakantsary izay hapetrany amin'ny alàlan'ny sensor dia tsy hihoatra ny 21 MP any aoriana na eo aloha, mizara mitovy ny fotony.
Unité centrale 4x 55 GHz ARM Cortex-A2.0 - 4x 55 GHz ARM Cortex-A2.0
TRANO 8 nm
RESOLUTION NY SCREEN Full HD + (2.520 x 1.080 teboka)
CHAMBERS 21.7 MP aoriana - 21.7 MP eo aloha - 16 + 5 MP roa
CONNECTIVITY LTE Cat 13 - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 802.11 ac - GPS - A-GPS - BeiDou - GLONASS
Samsung efa nanolotra ny Galaxy A21s izay misy amin'ny firenena maro ary manantena ny hanambara modely mandritra ny volana vitsivitsy miaraka Exynos 850 sy Exynos 880.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung Exynos 850: Chip 4G vaovao ho an'ny mid-range